Ahoana no hanatsarana ny tranokala SEO miaraka amin'ny backlinks ivelany?
Tadidinao ve ireo andro ireo rehefa tsy voafehy sy tsy voasazy ny fambolena fatoriana? Amin'ireny andro ireny dia afaka mahita rohy sasantsasany nalefa tamina pejy tokana ianao. Ny tranonkala dia afaka mahazo rohy jiosy nefa tsy manan-danja sy manam-pahefana. Ho tombontsoan'ireo mpampiasa sy ny karoka fitadiavana, dia tsy miasa intsony ny fambolena ankehitriny. Na izany aza, tsy midika izany fa ny rindran-tsavily ivelany amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mampisy vidiny amin'ny tranokalanao SEO. Raha tsy mampiasa rohy ivelany ianao dia ho very ny fotoana ahafahanao mivezivezy mankany amin'ny tranokalanao ary manatsara ny laharanao. Raha tokony hampiasa rohy ekena kosa ianao, dia ataovy izay hahatonga anao hifantoka tsara amin'ny teknika ampiasainao.
Ahoana ny fomba hananganana fanentanana SEO amin'ny fampiasana rohy ivelany?
Mamorona gazety an-tsoratra
Ny famoaham-baovao amin'ny gazety dia tsara ho an'ny orinasanao na trano fisakafoanana kely na fivarotana lehibe. Manome fahafahana anao hampahafantatra ny fivarotana raharaham-barotra ho an'ny besinimaro izany. Na izany aza anefa, tokony ho azonao antoka fa azo itokisana izy io, ary tsy natao fotsiny mba hampitomboana ny lalao. Raha manana fomba fijery mahazatra ianao amin'ny famoronana ny famoahana ny gazetiboky, dia ho azonao atao ny mamolavola drafitra tsara amin'ny marikao ary mametraka ny fifandraisana tsy miova amin'ny mpanjifa mety aminao. Na izany aza, raha miezaka ny hientanentana amin'ny fientanam-po amin'ny vaovao diso ianao dia tsy ho tsara ho an'ny sarinao marika izany ary mamolavola fa ratsy kokoa noho ny fihetsika tsara amin'ny orinasanao.
Maro ny tompona tranonkala tsy afaka ny hahazo lanjany amin'ny famoahana vahiny ary very ny fahafahany mivezivezy mankany amin'ny sehatr'izy ireo. Izany dia mitranga noho ny tsy fanarahan-dry zareo ity fomba fiasa mifandraika amin'ny rohy ity. Ny blaogin'ny Guest dia tsy manondraka ny blaogin'ny olon-kafa amin'ny alàlan'ny backlinks any amin'ny tranokalanao. Voalohany indrindra, fahafahana hizara ny kalitaonao sy ny votoatiny farany amin'ny blôgy izay mifandray amin'ny sehatry ny indostria.
Alao sary an-tsaina hoe mamoaka ny lahatsoratrao amin'ny bilaogy miaraka amin'ny mpanjifa 1K ianao. Noho izany, raha raisinao ny lahatsoratrao amin'ity sehatra ity, dia azonao atao ny mahita ireto mpamaky 1 000 mahita sy mamaky ny lahatsoratrao. Farafahakeliny ny antsasany dia hanaraka rohy mankany amin'ny tranokalanao vokatr'izany ary mety hiverina ho mpanjifa. Eto ianao, ny tanjonao voalohany dia ny hanomezana ny mpamaky amin'ny fampidirana fampahalalana tena sy mahaliana izay hampiakatra ny ahiahiny amin'ny marikao.
Nanangana tambajotra fanjono
Antony iray lehibe manan-danja amin'ny fampiasana rindran-kaonty ivelany ho an'ny fanentanana fanatsarana anao manangana tambajotra niche. Ny fananganana tambajotra mifandraika amin'ny niche dia ahafahanao mifandray amin'ireo influencé niche mahery ary mampitombo ny fahafahanao mifandray amin'izy ireo. Ny tsirairay aminareo dia afaka manome lanja lehibe ho an'ny mpihaino ny iray hafa. Ho vokatr'izany dia hahazo rohy ivelany avy any ivelany ianao ary hanome lanja ny mpanjifa mety aminao.
Mianara avy amin'ny lahatsoratra voaray
Ireo lahatsoratra manokana dia tombontsoa hafa ho an'ny orinasa. Azonao atao ny mametraka fepetra eo amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny tsindrona saina ao amin'ny tsenan-tsenanao ary manolotra azy ireo handoa vola amin'ny famoahana ny lahatsoratrao ao amin'ny pejiny. Ataovy azo antoka fa manafaka amin'ny votoaty tena izy ianao mba hahazoana valiny marina Source .